I-China pp ibhokisi enamazinyo yomvelisi ocacileyo kunye noMthengisi | Sihai
Iphepha le-Pp elinamazinki linokusetyenziselwa ukubonisa, ngesiqhelo, yenzelwe ibhokisi ebonakalayo, ukuhambisa ngenqanawa. Iphepha elingenamngxuma sisakhiwo sodonga lwamawele, luyakwazi ukugoba, ulwakhiwo lwodonga luyinto efanelekileyo yokukhusela iimveliso xa zithunyelwa.
Iphepha le-Pp elinamazinki linokusetyenziselwa ukubonisa, ngesiqhelo, yenzelwe ibhokisi ebonakalayo, ukuhambisa ngenqanawa. Iphepha elingenamngxuma sisakhiwo sodonga lwamawele, luyakwazi ukugoba, ulwakhiwo lwodonga luyinto efanelekileyo yokukhusela iimveliso xa zithunyelwa. Iphepha elingenanto elingenanto lingenziwa ngokwezifiso iintlobo ezininzi zebhokisi yepakethe, isitya seplastiki sokubonisa, ibhokisi ebonakalayo nayo inokongeza ukwahlula kweengxowa ezahlukeneyo kunye nokuveza.
Ibhokisi yephepha elingenanto ebonakalayo kulula ukuyisonga, ukugcina indawo, ukuzisa abathengi kwinqanaba eliphezulu kakhulu lokusebenzisa. Ibhokisi yebhodi engenanto yokuveza ibhokisi yenziwe ngezinto ezikhanyayo nezomeleleyo, ezingenawo amanzi, ubushushu obungenamlilo, anti-static, anti-corrosion, anti-wear, anti-UV, anti-vibration, anti-lowqondo lobushushu kunye neminye imisebenzi. Le misebenzi iqinisekisa ukuthembeka kunye nokusebenza kwebhokisi ukuya kwinqanaba elikhulu, kulungile ukukhusela iimveliso xa uhambisa okanye uhambisa. Kk incence ibhokisi incence ungenziwa ngemfuneko yoshicilelo kwiimveliso ezahlukeneyo kunye logo, ngesiqhelo ushicilelo silkscreen, abanye ungenza UV yoshicilelo ukusetyenziswa lwangaphandle.
Egqithileyo pp ibhokisi yokhetho engenanto
Okulandelayo: iphepha incence ukukhusela sheet